Diyopost.com :: हेर्नुहोस् हिरा र सुन यस्तो खाल्डोमा पाईन्छ हेर्नुहोस् हिरा र सुन यस्तो खाल्डोमा पाईन्छ - Diyopost.com
हेर्नुहोस् हिरा र सुन यस्तो खाल्डोमा पाईन्छ
एजेन्सी । पृथ्वीको बनोट विभिन्न आकारको छ । र जहाँ विभिन्न किसिमका खाल्डोहरु छन् । चाहे तिनी मानव निर्मित हुन्, या प्राकृतिक । यहाँ त्यस्ता १० वटा गहिरा खाल्डोहरु छन्, जुन धेरैजसो दक्षिणी भुभागतिर अवस्थित छन् ।
१. विङ्हम क्यानोन : दक्षिण पश्चिमी युटा क्षेत्र अमेरिकामा रहेको विङ्हम क्यानोन विश्वको सबैभन्दा गहिरो खाल्डो हो । यसको गहिराई १.२ किलोमिटर रहेको छ भने चौडाई २.५ माइल रहेको छ । १९०६ मा यस खाल्डोबाट सबैभन्दा बढि १७९,३१७ पाउण्ड कपुर निकालिएको थियो । २७९,२०० पाउण्ड सुन निकालिएको थियो भने २.४ करोड चादि निकालिएको थियो ।
२. चेक्इक्यामेटा कपुर खाल्डो : चिलीमा रहेको यो खाल्डोको गहिराइ ८५० मिटर भन्दा बढि छ । यस खानीबाट कपुर उत्पादन गरिन्छ । उक्त कपुर खानी चिली सरकारको लगानीमा सञ्चालीत छ । २०११ मा ४४३,००० पाउण्ड कपुर उत्पादन गरिएको थियो ।
३. निलो छिद्र : आइसल्यान्डमा अवस्थित यसको गहिराइ ६५० मिटर भन्दा छ । यो छिद्र समुद्री पानी मुनी रहेको छ । पानीमाथीबाट देखिने व्यास भने ८२ देखि ११५ फिट रहेको छ ।
४. डायमोन्ड खाल्डो : यो विश्वको सबैभन्दा लामो खाल्डो हो । यसको गहिराइ ५२५ मिटर छ भने १२०० मिटर व्यास रहेको छ । यो रसियामा अवस्थित छ । २०११ सम्ममा यस खानीले १० लाख क्यारेट हिरा उत्पादन गरेको थियो ।
५. डायविक खाल्डो : २००३ मा खुल्ला गरेको यो खाल्डो क्यानडामा पर्दछ । हरेक वर्ष यस खानीबाट १.६०० किलोग्राम हिरा उत्पादन गरिन्छ ।
६. विग होल : विश्वास गर्नै गाह्रो ७०० फिट गहिराइ र १,५१९ फिट चौडाइ रहेको यो खाल्डो मानव निर्मित हो । जुन दक्षिण अफ्रिकामा रहेको छ । यसबाट पनि हिरा निकालीन्छ ।
७. डोर टु हेल : प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने यस खाल्डोमा १९७१ द्येखि निरन्तर रुपमा आगो बलिरहन्छ । यसको चौडाइ २३० फिट रहेको छ भने ६६ फिट गहिरो छ । डोर टु हेल काराकुम मरुभुमिमा रहेको छ ।
८. बटमलेस खाल्डो, क्यालीफोर्निया : मनव निर्मित विश्वको सबैभन्दा लामो पानीको ड्याम हो । जुन क्यालीफोर्नीयामा रहेको छ । यो १९५३ देखि १९५७ मा निर्माण गरिएको थियो । जसको गहिराइ २८० फिट रहेको छ भने २२ मिटर चौडाइ छ ।
९ ओपेन पिट , अष्ट्रेलीया : खुला डायमोण्ड खानी १९५७ मा निर्माण गरिएको थियो । यस खानीबाट हरेक वर्ष १० लाख क्यारेट हिरा उत्पादन गरिन्छ । जुन ५२५ मिटर गहिरो छ भने १२०० मिटर चौडा छ ।
१०. ग्य्रासवर्ग : इन्डोनेसियामा अवस्थित यो खाल्डो विश्वको सातौ गहिरो खाल्डो मध्येमा पर्दछ । जुन विश्वकै लामो सुन भएको खानी भनेर चिनीन्छ । यो ५५० मिटर गहिरो छ । २०१२ मा ८६२,००० पाउण्ड सुन उत्पादन गरेको थियो ।
[स्रोत -माइनिङ ग्लोवल ]
विवाहअघि ऋषि धमलालाई एलिजाले भनेकी थिइन्,‘मलाई नायिका नबनाउने भए विवाह गर्दिन’
काठमाडौं, भदौ २२ । विवाहका लागि संसारमा केटा र केटीले अनौठो सर्त राखेको अबरहरु आइरहन्छन् । रिलिजको तयारीमा रहेको फिलिम ...
ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी युक्रेनी नटालिया : ७ तस्विरमा हेर्नुहोस् उनको अर्धनग्न पोज !
काठमाडौं । पोल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ६ सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकबाट लाखौँ ठगीको अभियोगमा महानगरीय अपराध महासाखा टेकुको हिरासतमा रहेका ...
रीता बुढाथोकी काठमाडौँ । होँचो कद । पातलो शरिर । केही कालो वर्ण । शरिरभरि टाँसिएका १५ किलो बराबरको सिक्का ...
कुकुरप्रेमि थाइल्याण्डका यी स्व. राजा, जसले कुकुरलाई इन्सल्ट गर्नेलाई ३७ वर्ष जेल हाले
काठमाडौं । थाइल्याण्डका राजा दिवंगत भूमिबोल अदुल्यादेज कुकुरका निकै सौखिन थिए । उनी सहभागी हुने कार्यक्रमहरुमा कुकुरपनि सँगै हुन्थे । ...
काँधमा हुक राखेर १ हजार ५० किलोको कार तान्ने यी पातला युवक ! [भिडियो सहित ]
भारत । 'सुकेको ज्युमा लुकेको बल' भनेझै कहिलेकाहि साच्चिकै कमजोर व्यक्तिले पनि बलीयो काम गरदिन्छन् । प्राय धेरैमा यस्तै भ्रम ...
संसारका यी १६ वटा दुर्लभ तस्विरहरु
एजेन्सी । भनिन्छ नि तस्विर आफै बोल्छ । एउटा तस्विरले हजारौ शव्द बाहिर ल्याउछ । प्रतिभाशाली कथावस्तु जे छ त्यहि ...
दुबईमा सुरु भयो ड्राइभर बिनाको बस सेवा, ड्राइभर बिना कसरी गुड्छ सडकमा ?
दुबई, १७ भदौ । खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सको बन्दरगाह सहर दुबईमा विद्युतीय प्रविधिबाट चल्ने चालकविना नै सेवा प्रदान गर्ने ...
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे याे कुकुरकाे रहस्य थाहा पाउनुहाेस् ? (फाेटाेफिचर)
एजेन्सी । ताइवानको एउटा कुकुर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । विभिन्न आकर्षक स्टाइलमा फुलको पहिरनले सजिएको उक्त कुकुरले सबैको ...